FIFIDIANANA BEN’NY TANANA : Nandraisana fepetra ireo tompon’andraikitra nahazoana fitarainana
Efa vonona avokoa ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny fanomanana ny fifidianana ben’ny tanàna, ho an’ny Minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. 22 octobre 2019
Nisy ny fandaminana tsy maintsy nirosoana mba hahafahana mifehy izany fifidianana izany. Tafiditra ao anatin’izany ny fanadiovana sy famindran-toerana ireo tompon’andraikita nahazoana fitarainana sy fanamarihana manokana avy amin’ny vahoaka eny ifotony. Nohenoin’ity minisitera ity avokoa ireo fitarainana ireo. Natao ny fanadihadiana ary nandraisana fepetra avy hatrany ireo izay hita fa nanao kitoatoa ny asany tokoa.
Nitondra fanazavana mahakasika ny fanoloana ireo lehiben’ny Distrika sy lehiben’ny fokontany vitsivitsy koa ny Minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Tianarivelo Razafimahefa, omaly. Nambarany nandritra izany fa ireo naharaisana fitarainana ihany no voakasik’io fanoloana io fa tsy ny rehetra akory. Famaliana ny tolotr’asa takin’ny vahoaka no antony nanesorana azy ireo tamin’ny toerany, hoy izy. “Tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatsarana ny fitantanana ny raharaham-panjakana ny fanoloana tompon’andraikitra. Miantoka ny fanatsarana ny tolotra omena ny vahoaka eny ifotony koa izany. Rehefa ela nitanana andraikitra teo amin’ny toerana iray ny tompon’andraikitra iray dia tsara raha mifanolo sy mifindra toeran-kafa indray. Ilaintsika izany ary tena ilaintsika mihitsy amin’ny fifanakalozana traikefa. Izay traikefa azo teo amin’ny toerana iray dia azo entina any amin’ny toerana hafa hampandrosoana azy”, hoy ny fanazavany.
Nomarihin’ny minisitra fa ny asan’ny lehiben’ny Distrika dia fanomezana tan-tsoroka ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana mandra-pahavitan’ny fifidianana sy mandra-pivoakan’ny valiny amin’ny fomba ofisialy. Diso tanteraka, hoy izy, ny filazana zavatra hafa ivelan’izany satria tsy afaka hitsakaba any anaty vilanin’ny Céni mihitsy ireny tompon’andraikitra nosoloina ireny mandritra ny fifidianana ben’ny tanàna. Tahaka izany koa ny fanoloana ireo lehiben’ny fokontany. Misy amin’ny lehiben’ny fokontany sasantsasany no nanao antsirambina ny asany, ka tsy maintsy nandraisana fepetra mifanaraka amin’izany.
“Ny lehiben’ny fokontany no manome tolotra ny vahoaka eny amin’ny fokontany misy azy avy. Misy amin’izy ireny no naharaisana fitarainana ka tsy maintsy nanaovana fanadihadiana ary nandraisana fepetra rehefa hita fa nitombina ny fitarainana. Tsy maintsy manao ny asa mampadio sy mampilamina io fifidianana kaominaly io isika satria io no fifidianana farany tanterahina amin’ity taona ity”, hoy ny minisitra, Tianarivelo Razafimahefa.